Dagaal saaka ka bilowday Muqdisho oo ilaa hada soconaya & Ciidamada DKMG oo guulo sheegtay – SBC
Dagaal saaka ka bilowday Muqdisho oo ilaa hada soconaya & Ciidamada DKMG oo guulo sheegtay
sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho waxaa saaka ilaa iyo iminka ka soconaya dagaal la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan kaas oo ay ciidamada Dowlada KMG ah ku qaadeen sida wararka lagu hayo fariisimo ay ciidamada xarakada shabaab alujaahidiin ku leeyihiin magaaladaasi .
Dagaalka ayaa noqday mid xabadiisu ay sii kululaayo goor barqo nimadii maanta ah waxaana ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Dowlada KMG ah oo saxaafada la hadlay in dagaalkan ay ku qabsadeen ciidamada goobo farabadan oo ay ka mid aheyd Masjidka Dabaqeynka, isgoyska Soos, iyo ex control Balcad oo ka tirsan degmada Hiliwaa.
Amaanduulaha ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya C/kriin aadan Dhagabadan ayaa arintan xaqiijiyay waxaanu intasi raaciyay in dagaalada ay qaadayaan ciidamada Dowlada KMG ah ay sii socondoonaan sidoo kalena ay la wareegi doonaan degmada keliya ee gacan ku heynta ugu harsan xarakada Alshabaab waa sida uu hadalka u dhigaye.
Ciidamada Dowlada KMG ah ee dagaalka ku jira ayaa si buuxda u kaabaya kuwa Amisom oo iyagu muqdisho u jooga nabad ilaalin iyagoona mararka qaar sameynaya Duqeymo xoogan oo ay ku garaacayaan deegaanada ay ku fool leeyihiin.
Dhinaca kale xarakada Alshabaab ayaa dhaq dhaqaaqyo ka wada deegaanada suuqa taas oo ay sheegeen in ciidamada dowlada KMG ah ay ku soo wajahanyihiin loona baahanyahay in ay shacabka ka qeyn qaataan dagaalada.
Isbalaarinta ay wadaan ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa ka dhalatay ka dib markii ay xarakada Alshabaab faarujiyeen fariisimo ad adag oo ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho xarunta dalka, waxaana iminka sida la sheegayo 16ka degmo ee Muqdisho uga xarsan ciidamada DKMG ah in ay gacanta ku dhigaan 1 degmo oo qura.